Izimfihlo ze forex zokuhweba
Ingabe ngempela ungakhetha ukuhweba imali - Ngempela ukuhweba
Yingani singanikezwa imali yokwakha imizi, kunamasimi. Ngabe ukuhweba ngokuzenzekelayo ngokuzenzakalelayo kungaba inzuzo?
Ingabe sihlukile? Kungenzeka awubanga nenkinga yokuphendula umbuzo wokuqala.
Abasuka ezweni elaliyiSoviet Union, ngakho konke ukufisa kwabo ukuxhumana futhi ilondoloze ubungane, kunzima ngempela ukujwayela lesi sici yokucabanga German. Ngempela, izihloko eziningi okukhulunywa ngazo kulezi Ziqondiso zidingidwa kabanzi yinqubo- mgomo eqondile ye- CLARCOR okungase kubhekiselwe noma kungabhekiselwa kuyo kulezi Ziqondiso.
Akufanele neze imali ukuthi awukwazi ukukhokhela ukulahlekelwa. Cishe wonke umuntu emhlabeni uyasizwa isigijimi salokho uMbuso oyikho, lokho ozokwenza nokuthi yena angazithola kanjani izibusiso zawo.
Izwe elihle lase ligcwele ubudlova, Kungongaphansi nongaphezulu nezikhala, Uma uzama ukwenza okuhle wawubulawa, Asicabangeki lesiya sikhathi lapho izingane zifa indlela, Abantwana nezimpunga bebulawa isifo socansi, Ubufebe, ubutabane nokungcola kwakusibekele. Ukuhweba CFDs athwala izinga eliphakeme lobungozi kusukela asizakale ingasebenza kokubili ukuze inzuzo yakho futhi abaphumeleli.
Izibonakaliso ze- forex eziphilayo zikunikeza ithuba lokuzuza kulokho okwenzeka kumhlinzeki wesignali, ngenkathi usaqhubeka nezimo zokulawula i. ) Kusobala ukuthi ngeke zimvumele umuntu ukuthi akhuleke kuNkulunkulu, futhi zingeke zimvumele umuntu ukuthi azi ukuthi buyini ubungcwele nobubi. “ Wena, Solomoni ndodana yami, yazi uNkulunkulu kayihlo futhi umkhonze ngenhliziyo ephelele. Kungaba yinto enhle ukuba uzitholele lolu lwazi.
Sifake izivivinyo eziningi esikhathini esedlule futhi ngakho- ke sanquma ukuzenzekelayo ukuhweba kwethu, cishe okufanayo lokho abathengisi abaningi abakucabangayo abangabonakali ukwenza imali yokuhweba. I- Skype ayinikezi amasevisi okukhokha noma ithumele izimali futhi ayilona ibhizinisi lamasevisi ezezimali. Lwe kuyikona ngempela? Ngezansi, bhala isenzakalo samuva njengesivivinyo sasesikoleni, lapho wenze KAHLE kodwa omunye wenza kangcono kunawe.
Ngenxa yalokho, CFDs kungenzeka ingalungeli wonke zimali ngoba kungenzeka ulahlekelwe capital yakho etshaliwe. Lena umvuzo wayo futhi omunye yako iwufanele ngempela wokufundwayo.
Njalo lapho nihlangene nabangane bakho, unaka kakhulu umuntu ofanayo wobulili obuhlukile. Ingabe ngempela impumelelo yalowo muntu isho ukuthi wena wehlulekile?
Ukuhweba ngezolimo) Senziwa izingane ezithenjiswa amaswidi kepha zingawatholi. Isiyalo uDavide asinika indodana yakhe uSolomoni sisisiza sibone indlela esingamjabulisa ngayo uNkulunkulu.
Uzokwazi ukuqala ukuzuza imali nge nje i- akhawunti yakho demo ngokusebenzisa ulwazi kanye. Ingabe zingamvumela umuntu ukuthi aphile ngokuqonda okukhulayo mayelana nokuthi akhuleke kanjani ngempela kuNkulunkulu?
Ingabe niyaphola? Uma sibuka izindaba zabanye abafake izicelo, kungabe.
Ngokusebenzisa isici sokuthumela nokwamukela imali ( uma sikhona), uyavuma ukuthi i- Skype isebenzisa izinkampani eziseceleni ukuhlinzeka amasevisi okukhokha nokudlulisa imali. Ingabe umthengisi ngokomzwelo?
Abaningi begijimisa imali, Bengazi ukuthi izophelelwa isikhathi. Ngisho uma unenkinga yokukhangwa abantu manje futhi eningenayo imali ukutshala ku- akhawunti yakho siqu ukuhweba bukhoma, usangakwazi ukwakha ukuhweba elichumayo.
Ingabe ngempela ungakhetha ukuhweba imali. Ukuphila eJalimane lihlukile ophilayo kwelinye izwe?
Ngempela, ‘ ulwazi lweqiniso luye lwaba luningi kulesi sikhathi sokuphela. Kodwa kungenzeka uye wabambeka ngaphambi kokuphendula owesibili nowesithathu. ” ( 1 IziKronike 28: 9) Iyini inhliziyo ephelele? Kungenzeka ukuthi akunakwenzeka ukusho kuze kube yilapho usuqale ukutshala izimali ngokujulile Forex emakethe.
’ — Daniyeli 12: 4. Kuyini ngempela ukuphola? Yinhliziyo ethanda uNkulunkulu ezimisele ukwazi nokwenza intando yakhe. Kungabe ukuthola itayitela noma imali kuyoletha ubu-.
Ngakho yiziphi izinzuzo usebenzisa izibonakaliso ze- forex bukhoma ngokuphambene nokuqoqa amathiphu angaphambili noma ukwenza ucwaningo lwakho olucelayo? Ngokuqinisekile, okungavamile amahloni AmaJalimane ngokwabo.